Ho avy mamiratra ho an’i Madagasikara – Blaogin'i Voniary
Loabary andasy nahafinaritra sy nahavelom-panantenana tokoa ilay mikasika ny “Ho avin’i Madagasikara” nokarakarain’ny banky iraisam-pirenena tamin’ny 28 Martsa 2018 teo. Anisan’ireo nanatrika tao ny tenako ary velom-bolo tokoa satria tsapa fa samy te hampandroso ny fireneny avokoa na ny tanora na ny lehibe ary tsy resaka toe-karena ihany ny fandrosoana fa mifandray amin’ny sosialy, ny politika ary ny toe-tsaina indrindra indrindra. Anisan’ny kitro ifaharan’ny fandrosoana ny maha-Malagasy antsika: fomba, kolontsaina, vokatra, harena voa-janahary sy ny hafa. Ireo mampiavaka antsika ireo indrindra no tokony avohitra mba hihena ny fahantrana ary hanana ny toerany eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena i Madagasikara. Fintina fohifohy ary no entina aminao.
Pr Sylvain Urfer
Hoy Mompera Sylvain Urfer izay mpandinika fiarahamonina sy mpanao asa soa : “ Taranaka iray na roa eo sisa raha ela indrindra dia hanjavona ny kolontsaina Malagasy”. Misy ireo fomba tokony havaozina ary misy ireo tokony tazonina. Ohatra iray akaiky indrindra amin’izany ny fihavanana izay voafetra eo amin’ny fianakaviana sy ny foko hatramin’izao. Tokony hivelatra eo amin’ny mpiray firenena io fihavanana io mba hiara-kandroso ny Malagasy rehetra.
Ilay tovovavy mpandresy tamin’ny fifaninanana famoronan-dahatsoratra #Blog4dev, Claudia Raobelina, dia nanazava ny momba ilay kilalao an-tsolosaina noforonin’izy ireo “Rangotra sy Fantsy”. Ampahafantatra an’I Madagasikara amin’izao tontolo izao no tanjona ka ireo vorona mampiavaka ny nosy no mpandray anjara fototra ao, holalaovina toy ny amin’ireny mampiady akoho ireny. Ny olana manko hoy izy dia tototrin’ny zavatra avy any ivelany isika ka mba anjarantsika indray izao no miezaka mamoaka ny mampiavaka antsika.
Hanta Tiana Ranaivo Rajaonarisoa dia nanamafy fa “Izahay mpandraharaha dia vonon-kiady mba hitsahatra farafaharatsiny amin’izao vanim-potoana misy antsika izao ny tsy rariny.” Ny tsy rariny ampitondraina ny vita Malagasy sy ny mpamokatra azy no tiana tenenina eto. Nanentana ny tsirairay koa izy mba hanjifa ny vita Malagasy eo amin’ny fiainana andavanandro. Afaka 30 taona hoy izy, mba ho 80 isan-jaton’ny fandaniana ataoko, ataonao sy ataontsika rehetra dia hatontona amin’ny vita Malagasy.
Dr Hery Ramiarison Aimé
Anisan’ny mpandray anjara koa Dr Hery Ramiarison, mpahay toe-karena. Nanamafy izy fa fanjakana ara-drariny no tena tadiavin’ny vahoaka Malagasy fa tsy dia fanjakana tan-dàlana loatra. Tamin’ny 1971 no ambony indrindra ny tahan’ny harinkarena isan’olona. Nanomboka hatreo dia nitotongana ny firenena ary na niarina kely aza dia tsy tafaverina tamin’ny laoniny intsony hatramin’izao. Mila finiavana avy amin’ny mpitondra fanjakana, ny tanora, ny mpandraraha ary ny daholobe vao afaka hiala amin’ny fahantrana isika.
Nanohina ahy manokana ilay tenin’i Dr Hery Ramiarison hoe “75 isan-jaton’ny Malagasy no tsy nahavita akory ny fanabeazana fototra”. Amiko, hoy aho, raha nametraka fanontaniana, ny antony lehibe mahatonga izany dia satria teny frantsay no ampitana ny lesona ka sarotra ho an’ny ankizy ny mahazo azy ka tokony hatao amin’ny teny gasy ny fampianarana. Nanaiky izy fa mety hanova zavatra izany satria na tamin’izy ireo nianatra aza dia nadika tamin’ny teny gasy ireo lesona nianarana. Fa tsy dia any loatra, hoy izy, ny olana fa ny votoatin’ny zavatra ampitaina amin’ireo ankizy mihitsy no tokony asiana fandinihana lalina mba ho zavatra ilainy sy hitany hampiarina. Marina tokoa izany, fa izay ilay lazain’I ED Andriamalala hoe Fanagasiana ny fampianarana: tsy fandikana amin’ny teny gasy fotsiny fa fandrindrana ireo lesona mba hifanaraka amin’ny zava-misy eto Madagasikara.
blog4dev, fampandrosoana, fandrosoana, fitiavan-tanindrazana, maha-malagasy, mpandraharaha malagasy, toe-karena malagasy, Vita Malagasy